1:01 PM Essays, Literature No comments
'तिमीले लु सुन पढेकी छौ ?' भर्खरै सुरु भएको कुराकानीलाई बलजफ्ती आफ्नैखाले बनाउन साहित्यतिर मोड्छु । ऊ नजिकै आइपुगेको नोर्बुलिंगका दरबार अघिल्तिर फुलेका फूलहरूलाई एकटक नियालिरहेकी छ । मेरो प्रश्न नबुझेको भाव अनुहारमा पोतेर ऊ सोध्छे, 'को भन्यौ ?' म फेरि दोहोर्‍याउँछु, 'तिमीहरूका एकजना घगडान क्लासिक लेखक छन् नी लु सुन, तिनका कथाहरू कत्तिको पढेकी छौ ?' हाँस्दै ऊ मैले लु सुनको गलत उच्चारण गरेको प्रस्ट्याउँछे र चाइनिज पाराले उच्चारण गर्छे । माने हल्लाउँदै मन्त्रोच्चारण गरिरहेका लामाहरूको गुनगुनका बीचबाट उसले 'ल्हु जुन' भनेको जस्तो सुन्छु ।
लु सुनका कथा नेपालीमा अनुवाद गर्ने खगेन्द्र संग्रौलाले जसरी उनको नाम लेखेका थिए, त्यसरी नै उच्चारण गरेको हुँ । अब उच्चारण सुधार्ने पक्षमा छैन म । दरबारको प्रांगणमा प्रवेश गरिसकेका छौं, मान्छेको भीड र हल्ला बढी नै छ । त्यसैले अलि ठूलो स्वरमा उसलाई भन्छु,
'तिमेरले जेसुकै भने पनि 'अ म्याड म्यान्स डायरी' लेख्ने ती बूढा हाम्रा लागि लु सुन नै हुन् ।' मैले यसो भन्दा ऊ बेपत्ता हाँस्छे । हामी नोर्बुलिंगका अर्थात् दलाई लामाको समर प्यालेसभित्र पस्छौं । उसको ठूलो हाँसो हलुका मुस्कानमा खुम्चिँदै बिस्तारै विलीन हुन्छ ।
आज हामी एउटा तिब्बती गाउँमा आइपुगेका छौं । वरिपरि हरिया पहाड छन् र बीचमा उपत्यकाजस्तो ठूलो चौर छ । केही गधाहरू घामको न्यानो रापमा ढाड सेकाएर चर्दै छन् । आफैंतिर लम्किरहेको एउटा गधालाई हेर्दै म जुलीलाई प्रश्न गर्छु, 'केटीहरूको सप्लाई कम भयो भनेर आफ्नो भाउ बढाउनलाई तिमीले पनि बिहे गर्न अटेर गरेकी हौ ?' ऊ आफ्ना लाम्चा दाँत देखाउँदै फिस्स हाँस्छे तर गम्भीर भएर बोल्छे, 'मेरो ब्वाइफ्रेन्डसँग भर्खरै ब्रेक भयो । अब त थाहा छैन कुनै दिन कसैप्रति म आकषिर्त हुन्छु कि हुन्नँ ।' गम्छु, उसले पूर्वप्रेमीलाई मनमनै गधा भनिरहेकी होली ।
'मेरो निजी जीवनमा उसले बढी नै हस्तक्षेप गर्‍यो ।' किन त्यस्तो गर्‍यो होला त ?
चौरमा जौका केही रोटी, उसिनेका आलु र स्टबेरी खाएपछि हामी मोटरतर्फ लाग्छौंं । मोटर चढ्नुअघि म उसलाई भन्छु, 'मैले तिम्रा मेटाफोरस् बुझें ।' ऊ तुरुन्त जवाफ दिन्छे,
'त्यसो भए तिमी पनि दार्शनिक हुँदै रहेछौ ।' म उसलाई ठट्टा गर्दै सम्झाउँछु, 'दार्शनिक हुनका लागि फिला -तिघ्रा) दुख्न थाल्नुपर्छ । मेरा तिघ्राहरू दुख्न थालेका छैनन् । अर्थात् म बूढो भएको छैन र म दार्शनिक होइन ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र २४ ०४:०० (कान्तिपुर दैनिक)